GUDDAHA KA AKHRI: 7 Qodob Ee Ugu Muhiimsan Heshiiska Imaaraadka Iyo Somaliland | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM GUDDAHA KA AKHRI: 7 Qodob Ee Ugu Muhiimsan Heshiiska Imaaraadka Iyo Somaliland
1 – Heshiiska waddanka Imaaraadka iyo Somaliland waa heshiis caalami ah, waa mid mujinaya inay Somaliland xor u tahay maamulka dhulkeeda iyo qarankeeda. Caalamkana tusaya inay la xaajoon karaan Somaliland. Arrintani waxay wax tar wayn u leedahay ictiraafkii iyo in caalamku ogolaado wax la qaybsiga Somaliland. Heshiiskanu waa mid dawlada Imaaraadka maalgashigeedii Somaliland kor u sii qaadaya, taasoo macnaheedu tahay Imaaraadku maanta Somaliland dan wayn iyo maalgashi wayn ayaa kaga jira oo lexejeclo ayaa Somaliland ka haysa. Waxtarka Dhaqaalaha iyo Dhismaha Arrimaha Bulshada